MinerGate: Etu esi wụnye Software Miner na GNU / Linux? | Site na Linux
N'oge ndị ọzọ, anyị dere banyere Ngwuputa Dijitalụ ha enwewokwa mmasị dị ukwuu nye ndị na-agụ akwụkwọ. N'oge ụfọdụ, isiokwu ndị a na-ekwu okwu ya abụwo Kedu otu esi ebuli GNU / Linux OS maka Digital Mining?, oge ndị ọzọ ọ dị ihe ụfọdụ GNU / Linux OS kwesịrị ekwesị maka Ngwuputa Ngwuputa ma ọ bụ nanị banyere Basic echiche metụtara na mpaghara nke Ngwuputa Dijitalụ, Cryptocurrencies, Blockchain ma ọ bụ FinTech.
Na ohere a, anyị ga-ekwu maka ya Ngwanrọ MinerGate na otu esi etinye ya na anyi OS GNU / Linux. Anyị ahọrọla Ụlọ ọrụ MinerGate, ebe ọ bụ na, na MS Windows Ọrụ Systemsrụ Ọrụ Systems, a na-ejikarị ya maka ịdị irè ya na ịdị mfe ya, na ịdị ike na ntụkwasị obi nke ikpo okwu ya.
Tupu na-aga n'ụzọ zuru ezu n'ime isiokwu, ọ dị mma icheta na maka a mma nghọta nke okwu ndị a metụtara Ngwuputa Digital, Cryptocurrencies, Blockchain ma ọ bụ FinTech, enwere ụfọdụ gara aga ma na-atọ ụtọ Njikọ posts n'ime Blog anyị, nke ga-adị mma ịgụ ma ọ bụ gụgharịa, nke anyị nwere ihe ndị a:
1 Gịnị bụ MinerGate?
2 Ntinye MinerGate
2.1 Nzọụkwụ 1
2.2 Nzọụkwụ 2
2.3 Nzọụkwụ 3
2.4 Nkọwa ikpeazụ
Gịnị bụ MinerGate?
Ụlọ ọrụ MinerGate ihu ọma ọ bụ Ngwanrọ ngwanrọ, ma ọ bụkwa aha nke Ihe Ngwuputa Ntaneti Online nyere site kwuru ngwa.
Dabere na ebe nrụọrụ weebụ ha, ikpo okwu na ngwanrọ a kọwara dị ka:
"Ụlọ ọrụ MinerGate bu ihe eji eme otutu ego nke emeputara na 2014 site na otu ndi choro igbochi blockchain. Anyị na-enye sọftụwia ngwanrọ kachasị mfe, ọrụ nkwado 24/7 a pụrụ ịdabere na ya na obodo na-enye aka na mkpofu gị.".
"MinerGate xFast GUI Onye na -egwuputa ihe bụ ihe dị mfe iji, arụmọrụ arụmọrụ dị elu. Dabere na koodu iwu ọgbara ọhụrụ, ngwa ahụ na-egosipụta ihe ngosipụta dị oke mma, na-eme ka ahụmịpụ nsị gị rụọ ọrụ karịa.".
Cheta naIji mezuo nkuzi a na nwụnye anyị ga-eji obere ụdị ahaziri iche na nke kacha mma Distro MX Linux 19.X oku Ọrụ ebube 2.0, nke na-ama mbụ kachasị nke ndị dị otú ahụ ihe aga-eme, dị ka anyị gara aga nkuzi kọwara maka ya. Ọzọkwa, ọ dị mma iburu n’obi na ụdị nke ugbu a nke Linux MX NJ 19.X ọ dabere na ya Debian GNU / Linux 10 (Buster).
Budata Ngwuputa Ngwuputa
Maka nke a, anyị ga-agakwuru ndị Downloads ngalaba nke kwuru na ebe nrụọrụ weebụ wee budata ụdị nke dị ugbu a maka GNU / Linux. N'oge a na-ede edemede a, ha na-aga maka nkwụsi ike mbipute 1.7, nke na-atụ aro maka ntinye na Ubuntu. Software a na-abịa ma ọ bụ na-enweghị eserese eserese, ya bụ, ọ na-abịa na ụdị maka Desktọpụ (GUI) na onye ozo maka Ọnụ (CLI).
Ozugbo ebudatara otu ma ọ bụ abụọ nsụgharị, otu ụdị (s) nwere ike itinye site na iji onye njikwa ihe ngwugwu ma ọ bụ njikwa njikwa nke masịrị gị, na usoro omenala ị họọrọ. Maka nkuzi anyị, anyị ga-eji iwu ahụ «dpkg». Ma dị ka ndị a maka ngwugwu GUI:
Ebe ọ bụ na, anyị na-eji GNU / Linux Distro Ọrụ ebube 2.0, iwu «dpkg» naanị akụkọ enweghị ndabere ma ọ bụ ọba akwụkwọ na-eso: «libqt5websockets5». Kedu, anyị nwere ike iwunye na mbụ ka anyị wee hụ onwe anyị na njehie a, ma ọ bụrụ na iji Distro a. Bụrụ na nke iji Ubuntu, Debian, MX Linux ma ọ bụ ndị ọzọ yiri ma ọ bụ na, na-echeta na-ebuli gị os, dị ka anyị gosiri na nke a ihe aga aga, nke anyị na-enwe mgbe niile na-emelite.
Ọ bụla njehie ọ bụla na-atụghị anya, n'ihi na dependencies ma ọ bụ ọba akwụkwọ, enwere ike idozi ya site na iji kọmputa ede nke ọ bụla n'ime iwu abụọ a, ma ọ bụ ihe ha na ha kwekọrọ na GNU / Linux Distro eji:
Ọ bụrụ na ijiri nrụnye ahụ nke ọma, ọ ka ga-amalite itinye ngwa ahụ, nke kwesịrị inwe ụzọ mkpirisi a na-akpọ Ụlọ ọrụ MinerGate na Nchịkọta ngwa, ngalaba Office. Ma ọ bụrụ na e nweghị nsogbu, ụfọdụ amaghị ma ọ bụ na-ahụghị, ọ ga-emeghe n'ụzọ zuru okè, n'ihi na ị na-abanye gị email na usoro ihe ngosi eserese na mmemme wee banye. Cheta na ị ga-ebu ụzọ debanye aha na Ikpokoro nke MinerGate iji mee ihe nke oma software.
Ọtụtụ mgbe ndị a Dijitalụ Ngwuputa Software chọrọ nchịkọta na ọba akwụkwọ nke vidiyo (NVidia, AMD na Intel) na-arụ ọrụ optimally. N'okwu nke Ụlọ ọrụ MinerGate, mbipute gị «MinerGate-xFast-cli-1.7-ubuntu.deb», chọrọ ntinye nke «nvidia-cuda-dev», nke chọrọ dabere na GNU / Linux Distro eji, iji budata usoro nchịkọta nke nwere ike itu gburugburu 600 MB
N'ọtụtụ ọnọdụ, ihe a ọ nwere ike ime ka usoro ahụ kwụsie ike ma ọ bụrụ na ha anaghị edozi nke ọma, ma ọ bụ na ịnweghị akụrụngwa kwesịrị ekwesị, ma ọ bụ nke ka njọ, ịnwere ike ịrịọ ka ihichapụ ndị ọzọ nchịkọta dị mkpa ma hapụ nke gị GNU / Linux Distro nwere nsogbu ma ọ bụ ghara iji ya arụ ọrụ. Ya mere kpachara anya, na nke a.
Na ọzọ isiokwu na-esonụ, anyị ga-ahọrọ ọzọ Dijitalụ Ngwuputa Software ịga anwale ọtụtụ, nke nta nke nta.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere Dijitalụ Ngwuputa Software akpọ «MinerGate», nke bụ otu n’ime ihe ndị a na-eji eme ihe dị mfe, ịdị irè na aha a ma ama nke Crypto Platform nke na-enye ya; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » MinerGate: Etu esi wụnye Software Miner na GNU / Linux?